Dowaladaha Khaliijka Carabta oo doonaya kala qeybinta dalka Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowaladaha Khaliijka Carabta oo doonaya kala qeybinta dalka Yaman.
On Dec 24, 2017 189 0
Dowlado badan oo carbeed oo maamulka Aala-sucuud uu hogaaminayo ayaa howlgallo milliteri ka wada dalka Yaman, kuwaas oo ay ku sheegayaan iney kaga soo horjeedaan malleeshiyaadka shiicada Xuuthiyinta balse waxay si isku mid ah u beegsadaan muslimiinta Ahlu Sunnaha gaar ahaan mujaahidiinta.
Marka laga soot ago howlgalladan ay wadaan ee duqeymaha ah kuwaas oo ay ku dhinteen boqollaal ruux, macluul darana ku keenay kumanaan qoysas Yamaniyiin ah, waxay dowladaha carbeed doonayaan kala qeybinta dalka Yaman, iyagoona u sacyinaya iney ku celiyeen qaabkii uu sagaashamaadkii ahaa dalkan oo ka koobnaa labo dowladood oo ka kala dhisan Koonfurta iyo Wuqooyiga.
Dowladaha Imaaraatka iyo Aala-Sucuud ayaa ah kuwu ugu muuqda ee taageeraya mashruuca kala qeybinta dalka Yaman, waxaana Imaaraatku hanti farabadan ku bixinayaan sidii uu ku meel mari lahaa arinkan.
Gole kumeelgaar oo ay hormuud ka yihiin siyaasiyiin koonfurta Yaman kasoo jeeda ayaa laga aas-aasay magaalada Cadan ee dalkaas, waxaana goluhu arimaha loo aas-aasay kamid ah inuu dhaqangeliyo una sacyiyo sidii Koonfurta ay u noqon lahayd dowlad madax banaan.
Caydaruus Al-Zubeydi oo ah gudoomiyaha golaha kumeelgaarka ee Koonfurta ayaa hadal uu jeediyay wuxuu ku sheegay in dhisida dowlad madax banaan oo koonfurta ka istaagta uu yahay hadafka ay leeyihiin dowladaha khaliijka carabta.
Kulankii ugu horeeyey ayuu golahan ku yeeshey magaalada Cadan, waxaana kasoo qeybgalay siyaasiyiin farabadan oo Yamaniyiin ah, kuwaas oo shuuciyadii Ruushka kusoo barbaaray.
Arintan ayaa ah mid kamid ah waxyaabihii laga dhaxley xamlada dowladaha Carabta ee Donald Trump ka amar qaata ay kusoo qaadeen dalka muslimka ah ee Yaman, haddii aan laga hortagina waxay sababeysaa kala go’ qoysas badan oo muslimiin ah kuwaas oo wada dhashey.